‘कम्युनिष्ट सरकारले सर्वसाधारणलाई छुने काम गर्न सकेन’- पण्डित (भिडियो सहित) | दर्पण दैनिक
‘कम्युनिष्ट सरकारले सर्वसाधारणलाई छुने काम गर्न सकेन’- पण्डित (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: २०७६ पुष ४ गते ०७:१३
यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्र र छ वटा प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार चलाईरहेको छ । अर्को मुख्य दल नेपाली कांग्रेस सरकारको प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संघिय संरचना अनुसार केन्द्रिय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारले देश सञ्चालन गरिरहेका छन । नेकपा सरकारले ‘सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारासहित आफ्ना कार्यहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा प्रतिपक्षको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ, के गर्दैछ नेपाली कांग्रेस ? प्रस्तुत छ, समग्र अवस्थाका बारेमा नेपाली कांग्रेस बाजुरा का सभापति कविराज पण्डितसँग दर्पण दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
वर्तमान समयमा नेपालको राजनीतिक अवस्था एकदम कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको मैले देखिराखेको छु । मैले यो भन्न खोजेको हैन कि कांग्रेस अहिले पराजित अवस्थामा छ, नेपाली कांग्रेस संघिय सरकार प्रादेशिक सरकारमा छैन त्यसकारण कमजोर छ । मुलुकका केहि महत्वपूर्ण विषयमा यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाईको सरकारको कमजोरीका कारणले र सरकार संचालनको कमजोरीका कारणले गर्दा अहिलेको राजनीतिक क्षेत्रमा कालो बादल मडारी राखेको मैले देखिरहेको छु ।
विशेष गरी भन्ने हो भने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहे तत्कालिन माओवादी होस चाहे त्यो तत्कालिन एमाले होस हिजो चुनावमा जाँदाखेरी राष्ट्रियतालाई मूल मुद्दा बनाएर गएका थिए । तर आज सुस्ता कालापानी देखि नेपालको सिमा विवाद छ । यो दुई तिहाईको सरकार छ । नेपालको संविधानले दुई तिहाईको अर्थ राख्छ । किनभने दीर्घकालिन सोच लिएर अघि बढ्ने हो भने यो मुद्दाको बारेमा संसदले एउटा निकास दिन सक्थ्यो । तर त्यो निकास दिन नसकेको र छिमेकी देशसँग डाईलग गर्न नसकेको कारण यो सरकार एकदम कमजोर राष्ट्रियताको सवालमा एकातिर भने अर्कातिर जनजीविकाको सवाल र सामाजिक न्यायको सवालमा पनि यो सरकार मैले कमजोर देखेको छु, कसरी भने पछिल्लो समयमा सरकारले जुन किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, ती गतिविधि सञ्चालन गर्दा हामीले राहत महसुस गर्ने खालको हुनुपथ्र्यो त्यो महसुस गर्न सकेका छैनौं ।
सरकार सञ्चालन गर्दाखेरी हत्या बलात्कार देशव्यापी रुपमा छदैँछ । त्यसमा जुन किसिमको अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो भएको छैन । अनुसन्धान गरेर अपराधिलाई कानुनी उपचार गर्नुपथ्र्यो । नेपाली जनजीवनमा प्रभाव पार्ने खालको कुनैपनि कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको छैन । खाली हिजो तत्कालिन एमाले मनमोहन अधिकारीले ल्याएको मुद्दाको बिँडा थामेर बसेको छ । त्यसो भएको कारणले गर्दा जुन तल्लो वर्गको मत पाएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ, त्यो पार्टीले तल्लो वर्गलाई यसले सम्बोधन गरेको मैले पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा नै छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर सुखको अनुभुति भएन, कुनै नयाँ र राम्रा काम भएका छैनन् भन्नुभयो, राम्रा काम पनि त भएका छ नि ?
राम्रा कामहरुमा भर्खरै दक्षिण एसीयाली खेल (साग) भयो । आयोजक राष्ट्र भएको हिसाबले खेलप्रेमीहरु सबैको सहभागिता राम्रै भएको हो । तर अन्य हिसाबले हामी एक दुई तीन भन्न सक्छौ सामाजिक स्ववलम्बन कम्युनिष्ट सरकारले गरेको होईन । जहिले पनि बृद्धभत्ताको कुरा गर्छ । २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार भएको बेला सामाजिक स्ववलम्बन भन्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । त्यस अन्र्तगत गाँउ विकास समितिलाई सशक्त बनाएर त्यसैको माध्यमबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै सबैभन्दा तल्लो वर्ग र समुदायसम्म सेवा सुविधा पु¥याने योजना हो । त्यसमा पनि ५० हजार गाविसलाई अनुदान रकम दिने गरेका थियौं ।
त्यसैको सिको गरेर कम्युनिष्टहरुले त्यो कार्यक्रम ल्याएको हो । अहिले पनि जनतालाई मन छुने र ठुलो कार्यक्रम ल्याएको मैले देखेको छैन । यद्यपि कम्युष्टिहरु लोकोप्रिय हुन्छन् तर त्यो कथाकथित लोकप्रियतालाई पनि हासिल गर्न सकेका छैनन् । खाली कुरा के हो भने नेपाली कांंग्रेस पछि पर्नुको कारण उनीहरु नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र यी दुईवटा पार्टी एकिकृत भएर मात्र यो स्थान आएको हो ।
हामीले पनि दुखकासाथ भन्नुपर्छ नेपाली कांग्रेसमा सम्पूर्ण रुपमा एकता हुन सकेको छैन । त्यसको फाईदा उठाउदैं दुई ठुला पार्टी मिलेर सत्ता सञ्चालनमा पुगेका छन । यसका पछाडी देशीविदेशी कारणहरु पनि छन । त्यसैले दुई तिहाईको सरकार बनेको हो । नेकपाको सरकारले अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न खोजीरहेका छन । यो संसदीय व्यवस्थाबाट आएको संविधान हो । यसमा नेपाली कांग्रेसकै अपनत्व बढि छ ।
संसदीय स्वरुप बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको भनाई हो । तर उनीहरुको भनाई राष्ट्रपतिलाई बढि अधिकार दिने, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी दिने । यो दुई तिहाईको सरकारले आफ्नो अनुकुल संसदीय स्वरुप बनाएर शाषकीय स्वरुप त्यो मोडेलमा लैजाने उनीहरुको खेल हुन सक्छ । तर यो मोडेलबाट सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यो मोडेलको भुमिका नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । नेपाली कांग्रेस के हो भने लोकतान्त्रिक विचार धारामा विश्वास राख्ने पार्टी हो । नेपालीहरुमा के लत परिसकेको छने प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै सडकमा आगो बाल्ने, सडकमा टायर जलाउने, चक्का जाम गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने विगतदेखिको नजिर बसिसकेको कारणले गर्दाखेरी नेपाली कांग्रेसले किन यस्तो काम गर्न सकेन भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि त्यो क्षमता राख्न सक्छ, तर नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यसो गर्दैन । अहिलेको स्थिति भनेको के हो भने नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसको सत्ताअनुभव बुझेका थिए । तर, कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा आएपछि केहि न केहि गर्छ होला भनेर जनताहरुले दुईतिहाई मत दिए । जनतामा पनि कांग्रेसप्रति केहि वितृष्णा हुँदो हो ।
त्यो पनि अर्को कारण हो । त्यसैले यो जनमत आएको हो । राष्ट्रियताको सवालमा होस, जनजीवनको सवालमा होस, सामाजिक न्यायको सवालमा होस, हिजो विस्तारवाद भन्ने साम्राज्यवाद भन्ने तर आज आफ्नो छातीमा टेक्दा पनि बोल्न नसक्ने स्थिति छ । त्यसो भएको कारणले नेपाली कांग्रेसले सालिन ढंगबाट विरोध गरिराखेको छ । आवश्यक प¥यो भने नेपाली कांग्रेस सडकमा पनि आउन सक्छ, सदनमा पनि आफ्ना क्रियाकलापहरु बढाउने छ । यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ ।
तपाँई बाजुरा जिल्लाको सभापति पनि हुनुहुन्छ, संघिय संसदको चुनावमा थोरै मतले पराजित हुनु भएको थियो, हारपछिको जिल्लाको समसामयिक विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । बाजुरा जिल्ला वास्तवमा विकासको दृष्टिकोणले पछाडी परेको जिल्ला हो । यसमा दुईमत छैन । बहुदलिय व्यवस्था आईसकेपछि विकासका केहि आधारभुत काम भएको छ, त्यो नभएको होईन । हामी हिजो चुनावमा जाँदाखेरी नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव पनि जितेका थियौँ । तत्पश्चात भएका प्रदेशको चुनाव र संघिय सांसदको चुनाव हुँदा म त्यस संघिय सांसदका उम्मेद्धार पनि थिएँ ।
मैले जनताका बिचमा बाचा के गरेको थिएँ भने यदि बाजुराबाट नेपाली कांग्रसको विजय भयो भने वास्तवमा बाजुरा जिल्ला अहिले विकासको सुचाङ्कमा पछि परेको छ, यो विकासको सुचाङ्कलाई तल घटाउन केके गर्नुपर्छ त त्यसका लागि विकाससँग जोडिएका लायन एजेन्सिजहरुसँग बसेर व्यापक रुपमा सम्मेलन गरेर बाजुराको विकासको सुचाङ्कलाई माथि उठाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा चुनाबी सोच थियो । बाजुराको विशेष गरी दुईवटा भेगमा विभाजित छ, एउटा पूर्वोत्तर क्षेत्र जहाँ अलि सुखा खडेरी बढि हुन्छ ।
सुखा खडेरी भएका कारण भोकमरी पनि छ । एरपोर्ट यसै क्षेत्रमा छ । यातायातको हिसाबले भर्खर जोडिएको छ । यहाँका तल्लो स्तरका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो मनसाय थियो । अर्कोतर्पm बाजुरा जिल्लाका नौवटै पालिकाहरुमा विकासका नयाँ रुप दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । साथैसाथै शैक्षिक प्रतिस्पर्धालाई पनि अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने थियो । गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडी बढाई अवसरका हिसाबले पनि सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेका थियौँ । तर अहिले जितेका जनप्रतिनिधिहरुले जति पनि योजनाहरु ल्याएका छन मैले माथि भनेका विषयमा ध्यान दिएको देखिदैँन ।
त्यहाँका जनजीवनमा प्रभाव पार्ने किसिमको नभईकन कार्यकर्ताहरुको रोजीरोटी, कार्यकर्ताहरुको फाईदाका लागि र कार्यकर्ताहरु रुझाउने खालका मात्र छन् भन्ने अनुभूति मलाई भईरहेको छ । यद्यपि स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले जितेका ठाँउमा राम्रा कामहरु भएका छन् । आफ्नो पार्टीले जितेको कारणले मैले त्यसो भन्न खोजेको होईन, अहिले स्थानिय तहमा संरचना छ । कार्यक्रमहरुको छनौट, योजनाहरुको छनौट र कार्यक्रम तथा योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधिहरुको छनौट छ । तर मैले विविध पक्षलाई नियालेर हेर्दा स्थानिय तहको संरचना अनुरुप कार्ययोजना अगाडी बढेको पाएको छैन ।
तपाँईको प्रतिस्पर्धीले सांसद जित्नु भएको छ, उहाँको पहुँच अनुसार उहाँले गर्नुपर्ने कामहरु भएका छन कि छैनन् ?
अब यसमा के छ भने केहि काम त भएका छन् । बाजुरा जिल्लालाई सुहाँउदो खालका विकास योजनाहरु भने भएका छैनन् । दीर्घकालिन सोचका कुनै पनि योजनाहरु आएका छैनन् । जुन बाजुरा जिल्लाको रुप फेर्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ, त्यो काम चाँहि हुन सक्दैन । मैले भन्न खोजेको के हो भने सानासाना टुक्रे योजनाहरु, झोले योजनाहरु, कार्यकर्ताको पकेट योजनाहरु गर्नुभन्दा पनि विशेष गरी टेक्निकल क्षेत्रमा लगानी गरेर हुने हो कि, मोडेल स्कुल खोलेर हुने हो कि, हस्पिटलको क्षेत्रमा लगानी गरेर हुने हो कि ? यस्ता विषयमा सोचेर हामी पुग्यौँ भने देखि राम्रो हुन्छ । यातायातसँग त हामी जोडियौं तर बाजुरा जिल्ला यातयातसँग जोडिदँैमा विकास भयो भन्न मिल्दैन । बाजुराका कृषिका क्षेत्रमा, पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडी गयौँ भने मात्र यातायासँग बाजुरा जिल्लाको सम्बन्ध रहन्छ ।
बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ, तपाँई जिल्ला सभापति भएको हैसियतले स्थनीय तहका कांग्रेस जनप्रतिनिधिहरुलाई कस्ता खालका सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिनुहुन्छ ? अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसलाई मजबुद बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रनिधि साथीहरुलाई मेरो एउटै सुझाव के छ भने हामी अर्काको त विरोध गर्न सक्छौँ, अरुले राम्रो काम गर्न सकेन भन्छौँ । तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पाएका ठाँउमा त हामीले पनि त राम्रा काम गर्नुप¥यो । त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले पनि हिजो स्थानिय तहको निर्वाचन हुँदा केहि प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेका छौँ ।
ती प्रतिबद्धताहरुलाई विशेष रुपमा भुल्न हुँदैन । अर्कोतर्फ, संविधानले दिएका अधिकारहरु र केही स्थानीय तह निर्देशिका ऐनहरुले तोकेका आधारहरुमा टेकेर बाजुराको दीर्घकालिन रुपमा शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तरलाई माथी उठाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गरेर योजनाहररु हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । विशेष गरेर हाम्रो जिल्लामा पहिला जति मिडियामा आउँथ्यो चामलको समस्या, भोकमरी समस्या, तर अहिले त्यस्तो देखिदैँन । त्यो त के भने भोकमरी समस्या होईन, त्यो त खाली चामलमरी समस्या मात्र हो ।
किनकि चामलका लागि मात्र लाग्ने अरुका लागि नलाग्ने । उत्पादन हुने ठाँउमा पनि मान्छेहरु काम नगर्ने, विदेशतिर मात्र जाने, आफ्नो बारी बाँझो राख्ने आदि कारणले आएको समस्या हो, त्यो भोकमरी समस्या होईन । त्यो चामलमरी समस्या हो, त्यो खालको समस्या पनि थियो । तर अहिले यातायातको सञ्जालसँग जोडिईसकेकाले त्यो चामलमरी समस्या पनि सुनिदैँन ।
भन्न खोजेको अहिलेको जमाना अनुसार योजनाहरु निर्माण हुनुपर्छ । आधुनिकिकरण नभएको खण्डमा हामी अगाडी जान सक्दैनौँ । कृषि हाम्रो परम्परागत ढङ्गबाट चलिरहेको छ, अन्य पक्ष पनि परम्परागत रुपमा नै चलेको छ । अझ भनौँ महत्वपूर्ण ठाँउहरु बढिमालिका, खप्तड पनि हाम्रै जिल्लाभित्र पर्छ, दुईवटा ठुला नदिहरु कर्णली नदि, बुढिगंगा नदि अझ माथीतिर कवाडी नदि पनि बगिराखेको छ । जलस्रोतको पनि प्रचुर संभावनाहरु छ । जलस्रोतमा मात्र मेगा प्रोजेक्ट बनाई लगानी गर्ने हो भने बाजुरा जिल्ला विकासका दृष्टिकोणले पछि पर्दैनौँ । अबको विकासका सोचहरु आधुनिकीकरणतर्फ जानुपर्छ भन्ने नै हो ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत संगठन कसरी अगाडी बढ्दै छ ?
निकै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर जानुको विकल्प छैन । नेपाली कांग्रेसको फागुनमा यसको समयावधि सकिदैँछ । नेपाली कांग्रेस जबसम्म एकरुपता भएर जान सक्दैन तबसम्म हामी हाम्रा चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न सक्षम हुँदैनौं । नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले यो पार्टीको बारेमा यति चर्चा भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अहिलेसम्म समायोजनपूर्व र समायोजनपछि तथा उनिहरुको एकिकरण भएपछिको अवस्थामा हाल सत्तारुढ पार्टीको पनि अधिवेशन र महाधिवेशन भएको छैन ।
तर यसको बारेमा कसैले पनि बोलेको छैन । मिडियामा पनि यो विषयमा बोलेको छैनन् । अधिवेशन कहिले हुने, महाधिवेशन कहिले हुने यसको उठान गरेका छैनन् । खाली मर्जको कुरा र एकिकरणको मात्र कुरा छ । तत्कालिन एमाले/माओवादीको महाधिवेशन कहिले भएको थियो र एकिकरणपछि जुन सत्तामा छन । नेपालको संविधानले समय थपथाप गरेर साँढे पाँच वर्षको बनएको छ । मलाई लाग्छ उनीहरुको पनि अधिवेशन हुनुपर्ने हो ।
सत्तारुढ पार्टीको पनि अधिवेशन हुनुपर्छ, यो कुरालाई पनि पत्रकार साथीहरुले यो समयमा मिडियामा उठाउनु पर्छ । सत्तारुढ पार्टीका विषयमा कहिँ पनि उठ्दैन । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका विषयमा कुरा उठिरहेको छ । जो लोकतान्त्रिक पार्टी छ, जो पारदर्शी पार्टी छ उसको बारेमा कुरा उठ्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । नेपाली कांग्रेसका पनि महाधिवेशन होला जिल्ला अधिवेशन होला । तर मेरो भनाई के हो भने यो भनेको नियमित प्रक्रिया हो, कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ, जिल्ला अधिवेशन हुन्छ यसमा ढुक्क भए हुन्छ । तर हाम्रा चुनौतिहरु के हुन भने महाधिवेशन तथा अधिवेशनमात्रै हामीले सामना गर्नुपर्ने होईन ।
हाम्रा चुनौतिहरु भनेको अधिवेशन गर्दै विपक्षीहरुसमक्ष ती चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व जन्माउने हो । वास्तवमा मलाई लाग्छ यद्यपि संघिय तथा प्रादेशिक चुनावमा हामी हारे पनि देशलाई जिताउने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघिय चुनाव गराएर, प्रादेशिक चुनाव गराएर र स्थानिय चुनाव गराएर देशलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउनुभयो । जबकी चुनावभन्दापूर्व अरु सबै समस्याहररु समाधान गरी मधेशको समस्यालाई पनि समाधान गरेर चुनावको कोर्षमा उहाँले ल्याउनुभएको हो ।
त्यसो भएको कारण शेरबहादुर देउवा पार्टीगत रुपमा पराजय भएपनि राष्ट्रिय रुपमा विजयी नेता हो, सफल नेता हो । काम गर्ने सन्दर्भमा केहि कुराहरु उठ्न सक्छन् । तर पनि उहाँलाई आरोप लगाईएको छ, बहुमतका आधारले पेल्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रमा जित हार त हुन्छ नि । आखिर जितेकाले नै काम गर्ने अवस्था दिने हो । हिँजो गिरीजा प्रसाद कोईराला, सुशिल कोईराला हुँदाखेरीको जस्तो साठी–चालिसको आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ भनेर हुँदैन । भोली कसैले चालिस ल्याउला, त्यो चालिसले पनि अवरोध गरिराख्ने ?
त्यो हिसाबले होईन । विधान अनुसारको काम हुनुप¥यो त्यसमा दुईमत छैन । साथै एक अर्कालाई साथ सहयोग र हौसला दिएर पार्टी अगाडी जानुप¥यो । साथै पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका जनतालाई म के भन्छु भने मुलुकले कम्युनिष्टको दुई तिहाईको सरकार देखिसक्यो । यो सरकारले न त नयाँ तरिकाले मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सके न त विदेशीहरुबाट नेपाललाई भाईचाराका रुपमा सम्बन्ध राख्न सफल भएको छ ।
कुटनीतिक रुपमा पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकेको छैन । हिँजो लोकतान्त्रिक सरकार हुँदाखेरी विदेशीहरुबाट आउने सहयोग अहिले सम्पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । त्यसकारण, विश्वभरीबाट कम्युनिष्ट हटिरहेको अवस्थमा नेपालको दुईतिहाईको सरकारबाट विकास सम्भव छैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक पार्टीका आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टीबाटमात्र समृद्धि र भोलीको विकासका लागि आवश्यक छ । यहि कुरा बाजुराबासी लगायत पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताहरुलाई भन्न चाहान्छु ।
सिमाना विवादका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यस विषयमा के छ भने मैले मेरा धेरै स्टाटसमा पनि भनेको छु । ईतिहासका पानाबाट हेर्ने हो भने धेरै पहिलादेखि भएको हो । यसमा लुकाउनु पर्ने केहि छैन । तर नेपालको सिमानालाई हेर्ने हो भने र भारतसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रमाणहरु छन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलिराख्नु भएको छ काली पूर्वका जतिपनि भू–भागहरु छन ती नेपालका भू–भागहरु हुन् ।
साथै भारतीय दस्ताबेजमा पनि प्रमाण रहेको अवस्था छँदैछ । यस्ता प्रमाणसिद्ध कुराहरु र भारतीय दस्ताबेजमा भएका कुराहरुमा नै भारतसँग डाईलग नगरेको अवस्थामा यो सरकार राष्ट्रियताको हल्का नारामामात्र सिमित छ । ठुला देशसँग अझ भनौँ भारतसँग छलफल गर्ने, कुटनीतिक सम्बन्ध बढाउने पक्षमा छैन ।
रहरै रहरले गायिका बनिएछ, तर धेरै कुरा सिक्न बांकी छ – किसु गुरुङ
२०७६ फाल्गुन २१ गते ०९:४५
परदेशी हुन कसैलाई रहर हुदैन यो बाध्यता नै हो । हाल सम्म लाखौं नेपाली कामको खोजीमा परदेशी भएकाम छन । यस्तै लाखौं मध्येकी एक हुन सुमधुर स्वरकी धनी गायिका किसु गुरुङ । किसु गुरुङ गीत संगीतको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । डेढ दर्जन गीतमा स्वर दिईसकेकी गायिका गुरुङ विगत लामो समय देखि ईजरायल बस्दै आएकी छन । परदेशको बसाई सँगै नेपाली भुमिलाई सम्झनामा राखि राख्न समय मिलाएर उनले गीत संगीतमा आफ्नो योगदान दिईराखेकी छन । नेपाली माटो सुहाउदो गीत संगितमा रुचि राख्ने गायिका गुरुङले विशेष गरि पूर्वेली भाकाका गीत अलि बढि गाएपनि उनका पश्चिमेली भाकाका गीत पनि बजारमा आएका छन । परदेशको बसाई नेपाली गीत संगीतप्रतिको माया लगायतका विषयमा दर्पण दैनिकले गायिका किसु गुरुङसँग गरेको कुराकानीः
२०७६ फाल्गुन १५ गते १२:००